Ukuba uvakalelwa ukuba ubizwa ukuba ubulungiseleli , unokuzibuza ukuba le ndlela ikulungele. Kukho uxanduva olukhulu olunxulumene nomsebenzi wobulungiseleli ngoko akusiyo isigqibo sokuthatha ngokulula. Indlela enkulu yokunceda ukwenza isigqibo sakho kukuthelekisa oko uvakalelwa kwinto ethethwa yiBhayibhile malunga nenkonzo. Esi sicwangciso sokuhlola intliziyo yakho sinceda kuba kukunika ingqiqo ukuba kuthetha ukuthini ukuba ngumfundisi okanye inkokeli yenkonzo.
Nazi ezinye iivesi zeBhayibhile kwiinkonzo zokunceda:
U Mphathiswa u sebenza
Ubulungiseleli abuhlali nje usuku lonke emthandazweni okanye ukufunda iBhayibhile yakho, lo msebenzi uthatha umsebenzi. Kufuneka uphume kwaye uxoxe nabantu; kufuneka udle umoya wakho; ukhonza abanye , uncedise kuluntu , nangaphezulu.
Efese 4: 11-13
UKristu wakhetha abanye bethu ukuba babe ngabapostile, abaprofeti, abathunywa bevangeli, abelusi kunye nootitshala, ukuze abantu bakhe bafunde ukukhonza kunye nomzimba wakhe uza kuqina. Oku kuza kuqhubeka size simanyane ngokholo lwethu nangokuqonda kwethu uNyana kaThixo. Emva koko siya kuba ngabaqolileyo, njengoKristu, kwaye siza kufana naye. (CEV)
2 Timoti 1: 6-8
Ngesi sizathu ndikukhumbuza ukuba utshintshe elitheleni isipho sikaThixo, esikuwe ngokubeka izandla zam. Kuba uMoya uThixo asinike wona awusenze sihlaziyike, kodwa usinika amandla, uthando kunye nokuzimela. Ngoko ungaba neentloni ngobubungqina ngeNkosi yethu okanye kum kumbanjwa wakhe.
Kunoko, zidibanise nam kwiintlungu ngenxa yeendaba ezilungileyo, ngamandla kaThixo. (NIV)
2 kwabaseKorinte 4: 1
Ngoko ke, ngenxa yokuba inceba kaThixo sinalobu bulungiseleli, asiphelelwa yintliziyo. (NIV)
2 kwabaseKorinte 6: 3-4
Siphila ngendlela enokuthi akukho mntu uya kukhubeka ngenxa yethu, kwaye akukho mntu uya kufumana inkohlakalo kubulungiseleli bethu.
Kwizinto zonke esizenzayo, sibonisa ukuba singabalungiseleli bokwenyaniso bakaThixo. Sinyamezela ngokunyamezela iingxaki kunye nobunzima kunye neentlekele zazo zonke iintlobo. (NLT)
2 IziKronike 29:11
Masingazilahli naliphi na ixesha, bahlobo bam. Nguwe abakhethiweyo ukuba babe ngababingeleli bakaNdikhoyo kunye nokunikela kuye imibingelelo. (CEV)
U Mphathiswa u xanduva
Kukho uxanduva olukhulu enkonzweni. Njengomfundisi okanye inkokheli yenkonzo, ungumzekelo kwabanye. Abantu bakhangele ukubona oko wenzayo kwiimeko kuba ukhanya lukaThixo kubo. Kufuneka ube ngaphezu kwehlazo kodwa ungeneka ngexesha elifanayo
1 Petros 5: 3
Ungabi ngabaphathi kubo abo bantu abakhathalelayo, kodwa wabeka umzekelo kubo. (CEV)
IZenzo 1: 8
Kodwa uMoya oyiNgcwele uya kuza kuwe kwaye anike amandla. Uza kuxela wonke umntu ngeYerusalem, eYudeya, eSamariya, nakuyo yonke indawo ehlabathini. (CEV)
Hebhere 13: 7
Khumbula iinkokeli zakho ezikufundisayo ilizwi likaThixo. Cinga zonke izinto ezilungileyo ezivela ebomini babo, kwaye landela umzekelo wokholo lwabo. (NLT)
1 Timoti 2: 7
Kuba ndamiselwa ukuba ngumshumayeli kunye nompostile-ndiyathetha inyaniso kuKristu kwaye ndingaxoki-ungumfundisi weentlanga ngokukholwa nangenyaniso. (NKJV)
Qaphela oko kwenzelwe ukuthembela kwakho, ugweme iingubo ezingcolileyo nezingenangqondo kunye nokuphikisana kwezinto ezibizwa ngokuba zilwazi ngokukhohlisa. (NKJV)
Yithembele kwiinkokheli zakho uze ungenise kwigunya lawo, kuba zihlala zikulindile njengalezo kufuneka zinike ingxelo. Yenza oku ukuze umsebenzi wabo ube luvuyo, kungekhona umthwalo, kuba akuyi kuba yinzuzo kuwe. (NIV)
Yenza okusemandleni akho ukuba uzibonakalise kuThixo njengento evunyelweyo, umsebenzi ongenakufuneka abe neentloni kwaye ngubani ophethe kakuhle ilizwi le nyaniso. (NIV)
Wabaxelela lo mzekeliso: "Ngaba imfama ingakhokela imfama? Ngaba bobabili bangena emgodini? "(NIV)
Magosa ecawa abaphethe umsebenzi kaThixo, ngoko ke kufuneka babe nolwazi oluhle. Akufanele babe ngabaphathi, abaphuthumileyo, abanxilisayo, abaxhaphazayo, okanye abangathembekanga kwishishini.
Ubulungiseleli Benza Intliziyo
Kukho amaxesha apho umsebenzi wokushumayela unokuba nzima kakhulu. Kuya kufuneka ube nenhliziyo eqinileyo ukujongana nezo zihlandlo kwaye uyenze oko kufuneka uyenzele uThixo.
2 Timoti 4: 5
Wena ke, soloko ucinga ingqondo, ukhuthazelele ukubandezeleka, wenze umsebenzi womvangeli, ufeze ubulungiseleli bakho. (ESV)
1 Timoti 4: 7
Kodwa akukho nto enokuyenza ngayo ngeengoma zehlabathi ezifanelwe kuphela kubafazi bamandulo. Ngakolunye uhlangothi, ziqeqesha ngokwenjongo yokuhlonela uThixo. (NASB)
2 kwabaseKorinte 4: 5
Kuba oko sishumayelayo akusiyo thina, kodwa uYesu Kristu njengeNkosi, kwaye thina njengabakhonzi bakho ngenxa kaYesu. (NIV)
INdumiso 126: 6
Abo baphuma bekhala, bethabatha imbewu yokuhlwayela, baya kubuya kunye neengoma zokuvuya, bephethe izitya. (NIV)
ISityhilelo 5: 4
Ndakhala ngokukhawuleza kuba akukho mntu ufunyenwe ukuvula umqulu okanye ukubona ngaphakathi. (CEV)
UMthetho waseMntla waseMntla waseMerika (uMthetho weBNA)
Ukuba i-Molecule i-Oxidized Ngaba ifumana okanye iLahle amandla?
Yintoni ngokwenene ekude kweNyanga